Fri, Jul 10, 2020 at 11:23am
मैले एकदिन बिदा बस्दा धेरैको जागीर गुम्छ, त्यसैले म बिदा नबसी काम गर्छु : सलमान खान
मुम्बई, १७ जेठ बलिउड अभिनेता सलमान खान १० वर्षपछि टेलिभिजन शो ‘दश का दम’ लिएर आएका छन्। सोमबार राति शो को लञ्च गर्दै सलमानले आफ्नो अनुभव शेयर गरेका छन्। पिता सलीम खानको प्रेरणामा आफू टेलिभिजनमा फर्किएको बताउँदै सलमानले आफूले विदा नलिई निरन्तर काम गर्ने गरेको सुनाए। छुट्टी विना हरेक दिन काम गर्दै आएका सलमानले यसबारे आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने– मेरो बुझाई यो..
बलिउडका प्रख्यात हस्ती करन जोहर र डिजाइनर मनिष मल्होत्रा समलिंगी सम्बन्धमा रहेको आशंका !
एजेन्सी, १६ जेठ बलिउड फिल्म निर्माता करन जोहर र भारतीय डिजाइनर मनिष मल्होत्राबीचको सम्बन्ध फेरि चर्चामा अाएकाे छ । यी दुइले सार्वजनिक रुपमा आफूहरु रिलेसनसीपमा नभएको बताइसकेका भएपनि मनिषले करनको जन्मदिनमा दिएकाे शुभकामनाले पुनः यी दुईबीचको सम्बन्धले भारतीय मिडियामा स्थान पाएकाे छ । मे २५ तारिखमा करन जोहरको जन्मदिनमा मनिषले एउटा फोटो पोष्ट गरेका थिए । फोटोको क्याप्सनमा उनले लेखे, ‘जन्मदिनको धेरैभन्दा धेरै शुभकामना मेरा निकै..
‘हेराफेरी’को तेस्रो श्रृखंला बन्ने: मूख्य भूमिकामा अक्षय, सुनिल र परेश नै दोहोरिंदै !
एजेन्सी, १५ जेठ ‘कमेडी अफ एरर्स’का लागि जानिएको चर्चित बलिउड कमेडी फ्रान्चाइज ‘हेराफेरी’को तेस्रो श्रृखंला बन्ने पक्का भएको छ। तेश्रो श्रृखंलामा पनि पहिलो श्रृखंलादेखि निरन्तर रहेका अक्षय कुमार, सुनिल शेट्टी तथा परेश रावलले अभिनय गर्नेछन्। मुम्बई मिररले फिल्मसँग निकट रहेका श्रोतको हवाला दिंदै लेखेको समाचारमा गत महिना फिल्म बनाउने पक्का भएको समाचार छापेको छ। समाचारका अनुसार फिल्मको सुटिङ डिसेम्बर र फेब्रुवरीको बिचमा गरिनेछ। त्यस्तै निर्माण..
बलिउड सुपरस्टार जोन अब्राहम सुटिङका लागि नेपाल आउँदै ?
एजेन्सी, १४ जेठ बलिउड अभिनेता जोन अब्राहम नेपाल आउने भएका छन्। अजय कपुरले निर्माण गर्ने नयाँ फिल्म ‘आरएडब्लु-रोमियो अकबर वाल्टर’ फिल्मको सुटिङ नेपालमा पनि हुने भएकाले उनी सुटिङका लागि नेपाल आउने भएका हुन्। ६० दिने सुटिङ तालिकासहित फ्लोरमा जान लागेको सो फिल्मको महत्वपूर्ण भाग भारतको गुजरात, जम्मु कश्मिर तथा नेपालका केहि शहरहरूमा छायाँकन गरिने भएको छ । फिल्मको सुटिङ जुनको पहिलो साता गुजरातबाट सुरू..
रणवीर-आलियाको प्रेम सम्बन्ध ! ‘मेरो गाला रातो भइरहेको छ र म कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छैन’
मुम्बई,१० जेठ पछिल्लो समय रणवीर कपुर र आलिया भट्ट बिचको प्रेम प्रसंगले बलिउडमा चर्चा बटुलीरहेको छ। सोनमको विवाहमा आलिया र रणवीर एक अर्काको हातमा हात राखेर विना शंकोच फोटो सुट गराएलगत्तै अनेकौं अड्कल बाजी गर्न थालिएको यी जोडीको सम्बन्धलाई बल पुग्ने पछिल्ला केहि प्रमाणहरुले झन् पुष्टी गरेको छ । आलियासँगको सम्बन्धबारेमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएका रणबीरले हालै आलियाबारे सोधीएको एक प्रश्नको जवाफमा..
शाहरुखकी छोरी १८ वर्षकी भइन्, म्यागजिन फोटोसुटको तयारी
एजेन्सी, ८ जेठ शाहरुख खानकी छोरी सुहाना खान मंगलबार १८ वर्ष पुगेकी छिन् । सुहाना सन् २००० को मे २२ तारिखमा जन्मिएकी हुन् । सुहानाकी आमा गौरी खानले आफ्नो इन्स्टाग्राममा सुहानाको ग्ल्यामरस फोटो सेयर गरेकी छिन् । उक्त फोटोमा उनले लेखेकी छिन्, ‘ न्भबचष्लन गउ ायच ब दष्चतजमबथ दबकज। त्जबलपक’ । रिपोर्टलाई विश्वास गर्ने हो भने गौरी खान र शाहरुख खानले छोरीको..
‘रेस–३’ फिल्मको ट्रेलर चर्चामा, ज्याकलिनको पोल डान्स हिट !
एजेन्सी, जेठ ६ सलमान खान अभिनीत ‘रेस–३’ फिल्मको ट्रेलर अहिले चर्चामा छ । केही दिनअघि सार्वजनिक गरिएको ट्रेलर र हिरिये बोलको गीतले पनि अहिले दर्शकको मन जितिरहेको छ । हिरिये बोलको सो गीतमा सलमान र ज्याक्लिन जमेर नाचेका छन् । सो गीतमा ज्याकलिनले गरेको पोल डान्सले अहिले तारिफ पाइरहेको छ । ज्याकलिनको त्यो पोल डान्स सुटिङकै क्रममा चर्चामा थियो । मित ब्रदर्स, डिप मनी र नेहा भासिनले गाएको..
‘रेस ३’ को प्रेस मिटमा पत्रकारले सलमानलाई दिए यस्तो जवाफ, सबैको बोली बन्द
मुम्बइ, जेठ ४ सलमान खानको आगामी फिल्म ‘रेस–३’को ट्रेलर रिलिज भएको छ । रिलिज भएसँगै ट्रेलरको लोकप्रियता हेर्दा यो फिल्म सुपरहिट हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छैन । यद्यपि अहिले यही फिल्मको प्रेस मिटमा एक पत्रकारले सलमानलाई दिएको जवाफ चर्चामा छ । ट्रेलर रिलिजका लागि आयोजना गरिएको फिल्मको प्रेस मिटमा फिल्मका सबै कलाकारदेखि टिम नै उपस्थित थियो । यहाँ पत्रकारहरुले फिल्मको टिमसँग प्रश्न..
२४ बर्षपछि ‘महाभारत’ मा एकसाथ देखिदै सलमान र अमिर, सलमानलाई कृष्ण बन्ने अफर !
मुम्बई, जेठ २ बलिउडमा मिस्टर पर्फेक्सनीस्ट भनेर चिनिने आमीर खानले बाहुबली निर्देशक एस एस राजामौलीलाई लिएर महत्वकांक्षी फिल्म ‘महाभारत’ बनाउने उदघोष गरेका छन् ।आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्ट ‘महाभारत’ निर्माण गर्न कुनै फिल्ममा साइन नगरेका आमिरले अबका १० वर्ष ‘महाभारत’ निर्माण गर्नमा फोकस गर्ने योजना बनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ। यतिबेला आमिर खानको ‘महाभारत’मा कृष्णको भूमिका कसले निर्वाह गर्ला भन्ने चासोको विषय बनेको छ..
बन्द हुने भयो प्रियंका चोपडाको ‘क्वान्टिको’ टिभी सिरिज, यस्तो छ कारण
मुम्बई, वैशाख ३० अमेरिकी टेलिभिजन एबिसीबाट प्रसारण भइरहेको प्रियंका चोपडा अभिनिय चर्चित ‘क्वान्टिको’ सिरिज स्थगीत हुनेभएको छ। सो प्रसारण गर्दै आएको टेलिभिनले प्रियंकासहित थुप्रै टिभी शो बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि प्रियंकाको शो पनि बन्द हुन लागेको हो। हाल सो सिरिजको तेस्रो सिजन प्रसारणरत: छ। टेलिभिजनले नयाँ कार्यक्रम गर्ने निर्णय लिएपछि टिभीका करिब आधा दर्जन टेलिभिजन कार्यक्रम बन्द हुन लागेका हुन्। शो बन्द हुनेभएपछि..
के तपाईलाई थाहा छ ? स्टारवार्सको यो पात्रले नेपाली मिसिएको भाषा बोल्छ
एजेन्सी, बैशाख २७ प्रत्येक वर्ष मे ४ लाई चर्चित हलिउड फिल्म फ्रान्चाइन ‘स्टार वार्स’का प्रशंसकहरूले विशेषरूपमा मनाउने गर्छन्। यो दिनमा यस फिल्मका प्रशंसकहरूले फिल्ममा आफ्ना प्रिय पात्रको रूपमा आफूलाई सजाउँदै सडकमा मार्च गर्नुका साथै सो फिल्मलाई पुन: हेर्ने गर्छन्। यध्यपी यो कुनै आधिकारिक दिवस जस्तो भने हैन्। वर्षौ यस फिल्मका प्रशंसकहरूले स्वत:स्फूर्तरूपमा यसलाई ‘स्टार वार्स डे’को मनाउँदै आइरहेका छन्। स्टार वार्स फिल्म आधुनिक..
सोनमको रिशेप्सनमा करिनाले ‘ओलेओले’मा यसरी कम्मर हल्लाएपछि
एजेन्सी, २६ वेशाख भारतीय अभिनेत्री एवम् बलिउड सुपरस्टार अनिल कपुरकी छोरी सोनमको विहेमा बलिउडका अधिकांश चर्चित अभिनेताहरुको उपस्थिति थियो । रिसेप्सन पार्टीमा पनि त्यतिकै मात्रामा बलिउड सुपरस्टारहरुको उपस्थिती दखिन्थ्यो । त्यसैले पनि सोनमको रिशेप्सन पार्टी निक्कै सानदार भयो । उनको रिशेप्सनमा बलिउडका थुप्रै कलाकारहरुले आफ्नो डान्स पिनि देखाए । सोही क्रममा बलिउड अभिनेत्री करिना कपुरले डान्स गरिन् । उनले डान्स गरेको गीत..
रेस-३ मा सलमानलाई बबीको टक्कर, बबी देओल र ज्याक्लिन फर्नान्डिजको जोडी फिल्मको पोस्टरमा !
एजेन्सी, काठमाडौँ २५ बलिउड अभिनेता बबी देओल केही समयदेखि फिल्ममा देखिएका छैनन् । पछिल्लो समय डिजेका रुपमा व्यस्त रहेका बबी फिल्म रेस - ३ मा सलमान खानसंग प्रतिस्पर्धी बनेर आउदै छन् । सलमान खान र ज्याक्लिन फर्नान्डिजको जोडीका रुपमा यो फिल्मको पोस्टर हालै सार्वजनिक गरिएको थियो । फिल्म रिलिज हुन ५ साता रहँदा बबी देओल र ज्याक्लिन फर्नान्डिजलाई जोडी बनाएर फिल्मको अर्को..
बलिउड नायक सलमान खान आज फेरि अदालतमा पेश हुने
एजेन्सी, २४ बैशाख कृष्णसारको शिकारको मामलामा जोधपुरबाट जमानत पाएपछि बलिउड नायक सलमान खान सोमबार पुनः अदालतमा पेश हुँदैछन् । यो सुनुवाइको क्रममा उनका वकिलले अदालतसँग सलमान खानको सजायँ रद्द गर्न आग्रह गर्नेछन् । यसमा सलमानलाई दोषी पाइएको छ र उनलाई पाँच वर्षको सजायँ सुनाइएको थियो । यो घटना सन् १९९८ को हो । फिल्म ‘हम साथ–साथ हे’ को सुटिङको क्रममा सलमान खानले कृष्णसारको..
विश्वकै कान्छा निर्देशक सौगात विष्टले निर्माण गरे : ‘हैरान’ मिक्स मसला फिल्म
चितवन २३, बैशाख : १२ वर्षीय सौगात विष्ट जुन विश्वकै कान्छा निर्देशक हुन् । उनले गरेको चलचित्र ‘हैरान’को प्रदर्शन मिति नजिकिएसँगै निर्माण समुहले पनि प्रचारप्रसार तिब्र पारेको छ । कान्छा निर्देशक विष्टसहित चितवन पुगेको उक्त समुहले आइतबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी चलचित्र प्रेम, कमेडी, सामाजिक विषयबस्तु र द्धन्द्ध समेटिएको मिक्स मसला भएको भन्दै सबै बर्गका दर्शकले हेर्न मिल्ने खालको बनेको जनाएको..
सलमानको नयाँ फिल्म रेस थ्री सुटिङ अगावै बिक्री,१ सय ९० करोडमा कारोबार
वैशाख २१ सलमानको नयाँ फिल्म रेस थ्री सुटिङ अगावै बिक्री भइसकेको बताइएको छ । खबरका अनुसार फिल्ममा सह–निर्माता रमेश तैरानीले यसलाई १ सय ९० करोड भारुमा बेचिदिएका छन् । पिंकभिल्लाको रिपोर्ट अनुसार इरोसले फिल्म निर्मातालाई १ सय ९० करोड भारुमा यसलाई खरिद गर्ने अफर दिएका थिए । यसमा १ सय ६० करोड वर्ल्डवाइड डिष्ट्रिब्यूशन राइटसका लागि मिनिमम अमाउन्ट छ । यो फिल्मका..
स्वदेशमै सपनाको खेती गर्ने युवाप्रति समर्पित फिल्म 'गोपी' बन्दै
काठमाडौं २१ बैशाख : आरोही इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा फिल्म ‘गोपी’ निर्माण हुने भएको छ । देशमै केही गर्न सकिन्छ र गर्छु भन्ने पात्रको जीवनमा आइपर्ने घटना र उसले सामना गर्ने पारिवारिक, सामाजिक र नीतिगत अड्चन फिल्मको मुख्य विषयवस्तु रहेको छ । संघर्षपछि उसले हात पर्ने सफलता फिल्मको मूल कथा हो । ‘कठिन परिस्थिति र जटिल परिवेश हुँदाहुँदै पनि वर्तमान समयामा स्वदेशमै सपनाको खेती..
रजनीकान्त सर्वाधिक महँगा अभिनेता, तोके एउटै फिल्ममा १०४ करोडको पारिश्रमिक
एजेन्सी, बैशाख २० सुपरस्टार रजनीकान्त भारतका एक महँगा अभिनेता हुन् । उनको पारिश्रमिक फेरि बढ्ने भएको छ , सुब्बाराजका फिल्मका लागि उनले पारिश्रमिक १०४ करोड नेपाली रूपैयाँ अर्थात् ६५ करोड भारू. पारिश्रमिक लिनेभएका हुन् । तर फिल्म निर्माताहरूले पारिश्रमिकका बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । उनले यसअघि सन् २००७ मा ‘शिवाजी’ नामको फिल्ममा अभिनय गरेका थिए । उक्त फिल्ममा एशिया महादेशको सबैभन्दा..
‘एभेन्जर्स : इन्फिनिटी वार’को भारतमा नयाँ रेकर्ड, तोड्यो ‘बागी २’ र ‘पद्मावत’ को बक्सअफिस !
एजेन्सी, १६ वैशाख । हलिउड सुपरहिरो फिल्म ‘एभेन्जर्स : इन्फिनिटी वार’ ले ‘बागी २’ र ‘पद्मावत’ को रेकर्ड तोडेको छ । रिलिज भएको दिनदेखि ‘एभेन्जर्स’ को नाममा धेरै रेकर्ड बनेको छ । फिल्मले संसारभर राम्रो आम्दानी गरेको छ । भारतमा त यसले ‘बागी २’ र ‘पद्मावत’ को रेकर्डलाई धेरै पछि छोडेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । भारतको बलिउड बक्स अफिसमा ‘एभेन्जर्स’ ले..
बरुण धवनको १३ वर्षमै भएको थियो पहिलो 'किस', 'सेक्स' चाँही कति वर्षमा ?
एजेन्सी, बैशाख १४ बलिउडमा नन स्टप हिट फिल्म दिइरहेका अभिनेता वरुण धवन सामान्यतया आफ्ना निजी कुराहरु मिडियामा सेयर गर्न रुचाउँदैनन् । तर, हालै एक अन्तरवार्तामा उनले आफ्नो निजी जीवनका केही रहस्यहरु खोलेका छन् । अन्तरवार्तामा वरुणले पहिलोपटक १३ वर्षको उमेरमा कुनै केटीसँग टंग किस गरेको खुलासा गरे । आफू विद्यालयमा पढ्दा ती केटीसँग प्रेममा परेको र उनकै घरमा पढ्ने बहानामा कोठा बन्द..
हलिउडको बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘एभेन्जर्स इन्फिनिटी वार’ले रिलिज अघि नै कमायो ५० करोड
काठमाडौँ, बैशाख १३ हलिउडको बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘एभेन्जर्स इन्फिनिटी वार’ ले रिलिज अघि नै ५० मिलियन डलर कमाइ भइसकेको छ । अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार फिल्मको प्रि–टिकट बिक्रीबाट ५० मिलियन डलर कमाइ भएको हो । शुक्रबार प्रदर्शन हुने यो फिल्मको संसारभर एक हप्ताअगाडिदेखि नै बुकिङ सुरु भइसकेको छ । काल्पनिक दुनियाँको सुपर हिरोज्लाई लिएर एन्थनी र जोय रुसो दाजुभाइले निर्देशन गरेकोे फिल्ममा रोबर्ट डाउनी..
पवन कल्याणको बचाउमा आखिर किन आए अल्लु अर्जुन ?
काठमाडौं, बैशाख १२ अभिनेता अल्लु अर्जुन आफ्ना अभिनेता काका एवं राजनीतिज्ञ पवन कल्याणको पक्षमा उभिएका छन्। अभिनेत्री श्री रेड्डीले पवन कल्याणलाई व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लगाएपछि उनले आफ्ना काकाको बचाउमा गरेका हुन्। उनले आफ्ना काकाको व्यक्तित्वमा आक्रमण गर्ने श्री रेड्डीको आलोचना समेत गरेका छन्। हालै पवन कल्याणले फिल्म उद्योगमा उनीमाथी भएको यौन शोषणको विषयलाई मिडियामा भन्दा प्रहरीकोमा लैजान सुझाव दिएपछि श्रीरेड्डीले उनको कडा..
संजय दत्तको बायोपिक फिल्म ‘संजु’ को टिजरमा देखियो रणवीर कपुरको पाँच फरक रुपहरु :
काठमाडौँ, ११ वैशाख बलिउड सुपरस्टार संजय दत्तको जीवनीमा आधारित फिल्म ‘संजु’ को टिजर सार्वजनिक भएको छ । जसमा दीया मिर्जा संजयकी पत्नी मान्यताको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छिन् भने रणवीर कपुरले संजय दत्तकै भूमिकामा देखिइरहेका छन् । राजकुमार हिरानीले निर्माण निर्देशनमा बन्न लागेको यो फिल्ममा मनिषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, सोनम कपुर, परेश रावल लगायतको भूमिका रहेको छ । फिल्ममा संजयको पुरानी प्रेमिकाको भूमिकामा सोनम..
‘बाहुबली’ निर्देशकको आगामी फिल्मको बजेट ४८० करोड, रामचरण र एनटिआर मुख्य हिरो
काठमाडौँ, १० वैशाख ‘बाहुबली’ निर्देशक एसएस राजामौलीको आगामी फिल्मको बजेट पनि ठूलो हुने भएको छ। करिब ८०० करोड रूपैयाँमा दुई भाग लामो फिल्म तयार गरेका राजामौलीको यस फिल्मको बजेट करिब ४८० करोड हुने भएको छ। सो फिल्मको नाम ‘आरआरआर’ तय गरिएको छ। फिल्ममा दुई ठूला सुपरस्टार रामचरण र एनटिआरको मुख्य भूमिका रहनेछ। हाल फिल्मको सेट निर्माणको काम भइरहेको छ भने राजमौलीले स्क्रिप्टलाई अन्तिम..
आमा बन्दैछिन् बलिउड अभिनेत्री इलियाना डिक्रुज, को हुन् उनको श्रीमान् ?
एजेन्सी, ७ वैशाख । आफ्नो नीजि जीवनलाई मिडियाबाट गोप्य राख्न सफल बलिउड अभिनेत्री इलियाना डिक्रुजको जीवनको एउटा महत्वपूर्ण अवस्थालाई मिडियाहरुले थाहा पाएको विश्वास गरेका छन् । पहिले आफ्नो प्रेमीलाई मिडियाको नजरबाट लुकाएर गोप्य विवाह गरेकी इलियाना अहिले आमा बन्न लागेको मिडियाले विश्वास गरेका छन् । मुम्बई मिररको रिपोर्ट अनुसार इलियाना गर्भवती छिन् । हालै एउटा एयरपोर्टमा इलियानाको तस्वीर लिने क्रममा उनले आफ्नो..
दीपिका पादुकोण भइन् विश्वको प्रभावशाली बलिउड सेलेब्रेटी, प्रियंका चोपडाद्वारा बधाई !
मुम्बई, ७ बैशाख टाइम म्यागजीनको यो वर्षको १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा यो पटक दीपिका पादुकोण पनि परेकी छन्। बलिउडकी उनी एक्ली हस्ती हुन्, जसलाई यो सम्मान प्राप्त भएको छ। दीपिकाको यो उपलब्धीलाई प्रियंका चोपडाले वधाइ दिएकी छन्। टाइम म्यागजीनद्वारा प्रत्येक वर्ष यो सूची जारी गरिन्छ। जसमा विश्वभरका यस्ता १०० व्यक्तिलाई समावेश गरिन्छ, जो आफ्नो पेशा वा व्यक्तित्वले धेरैलाई प्रभावित पार्न सक्ने क्षमता..
अनमोल केसीको ‘क्याप्टेन’का लागि चुनियो नयाँ हिरोइन, प्रियंका एमबी चेरी डेब्यु गर्दै !
काठमाडौं, वैशाख ६ भुवन केसीको लगानिमा बन्न लागेको फिल्म ‘क्याप्टेन’का लागि युवा स्टार अनमोल केसीको अपोजिटमा विभिन्न नायिकाहरुको नाम चर्चामा रहेपनि एक नाम अहिलेसम्म पक्का भइसकेको छ। त्यसैका लागि अहिले अनमोल फुटबल सिकिरहेका छन्। एक नाम फाइनल भए पनि यो फिल्मको कथाले २ अभिनेत्रीहरु माग्छ। त्यसैले अर्कि अभिनेत्रीको पनि नाम जोडिन पुगेको छ। उपासनालाई फाइनल गरेको केही समयपछि फिल्मको निर्माण पक्षले अर्की अभिनेत्रीलाई पनि फाइनल गरेको छ। समाचारमा आएअनुसार..
लिलिबिलीले कमायो पाँच दिनमा साढे तीन करोड ! सिंगल र मल्टिप्लेक्स दुवैमा दर्शकको चाप
काठमाडौँ ५, वैशाख गोविन्द शाहीले आफ्नो फिल्म लिलिबिलीले प्रदर्शनको पाँच दिनमा साढे तीन करोड रुपैयाँ व्यापार गरेको बताएका छन् । सिंगल र मल्टिप्लेक्स, दुवैमा पाँचाैँ दिन पनि दर्शकको उत्तिकै चाप रहेको बताउँदै शाहीले भने, ‘दर्शकले लिलिबिली निकै मन पराएका छन् । हलमा दर्शकको चाप उस्तै छ ।’ दर्शकले प्रदीप खड्का र जसिता गुरुङको कामलाई विशेष मन पराएको उनले बताए । ‘फिल्म नै..
वरुणको धवनको ‘अक्टुबर’ले अहिलेसम्म कति कमायो ?
काठमाडौं, ३ वैशाख वरुण धवनको फिल्म ‘अक्टूबर’ले रिलिजको दोस्रो दिन सात करोड भन्दा बढीको व्यापार गरेको छ । दोस्रो दिन फिल्मले सात करोड ४७ करोडको व्यापार गरेको हो । रिलिजको दिन फिल्मले पाँच करोड चार लाखको व्यापार गरेको थियो । शूजित सरकारको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा बरुण र बनिता सिन्धूको मुख्य भूमिका छ । दुई दिनमा फिल्मले १२ करोड ५१ करोड कमाएको छ ।..
लामो समयको अन्तरालपछि अक्षयकुमार र ऐश्वर्या एकसाथ ठुलो पर्दामा देखिदै
काठमाडौं, २ वैशाख । बलिउड सुपरस्टार अक्षयकुमार र ऐश्वर्या राय बच्चनले ‘खाकी’ र ‘एक्सन रिप्ले’पछि सँगै काम गरेका छैनन् । अब उनीहरु लामो समयदेखि एकसाथ देखिने भएका छन् । भारतीय मिडियाका अनुसार अक्षयकुमार र रजनीकान्तको फिल्म २.० मा ऐश्वर्या पनि देखिनेछिन् । उनी विशेष प्राथमिकताका साथ फिल्ममा देखा पर्न सक्ने बताइएको छ । २.० को पछिल्लो भागमा उनी लिड रोलमा थिइन् । ऐश्वर्याले..
Results 550: You are at page 12 of 19